Budata Space Simulator maka Windows
Budata Space Simulator
Budata Space Simulator,
Ọ bụrụ nrọ gị bụ ịbụ onye na -agụ mbara igwe, ọ bụ egwuregwu ịme anwansị ị nwere ike ịnụ ụtọ igwu egwu.
Ihe ngosi simenti a mepụtara maka kọmputa gị na -enye anyị ohere isonye na ọrụ oghere dị iche iche. Na mgbakwunye na ọrụ oghere akụkọ ihe mere eme dị ka Apollo 8, ọrụ oghere Apollo na nso nso a dịkwa na egwuregwu ahụ. Na mgbakwunye na ọrụ ndị a, ị nwere ike họrọ ọrụ dị iche ma jiri aka gị kpọọ egwuregwu dịka ịchọrọ.
Na Space Simulator, ị na -ebuli ụgbọ elu gị site nịgbaso ntuziaka ndị dị mkpa sitere na ụwa, nwaa ịpụ na orbit, gaa nọdụ ụgbọ elu mba ụwa, kwụsị ụgbọ elu gị na ọdụ a wee laghachi ụwa. Ozi a anyị na -ekwu maka ya bụ naanị otu nime ọrụ dị iche iche dị na egwuregwu ahụ. Noge ozi ahụ, ị ​​nwere ike jiri ụgbọ elu nke mbụ mmadụ na-agagharị nime ụgbọ elu gị wee hụ nime ụgbọelu ahụ. Egwuregwu ahụ nwekwara ọnọdụ mkpagharị nefu.
Space Simulator, nke gụnyere Sistemụ Igwe zuru oke, bụ egwuregwu ịme anwansị ebe ị nwere ike isi na ụwa gaa Ọnwa wee lelee anya ụwa site na mbara. Obere usoro chọrọ nke Space Simulator bụ ndị a:
- 2GB nke nchekwa efu
Space Simulator Ụdịdị